Ọla Pel nke Oke Ọnụ-Ahịa
Ndepụta nke Okwukwe
Ọla Pel nke Oke Ọnụ-ahịa bụ nhọta nke ihe nile dị mmasị metụtara ọtụtụ ngalaba pụtara ìhè nke okwukwe na ozizi nke Nzukọ nke Jisụs Kraịst nke Ndị-nsọ Ụbọchị-Ikpeazụ a. Ihe ndị a nile ka Onye-amụma Joseph Smith wepụtara ma e bipụtara ha n’akwụkwọ akụkọ na-apụta n’oge n’oge nke Nzukọ nsọ nke ụbọchị nke ya.
Chineke kpughee onwe ya nye Moses—E nwogharịa Moses—Ya na Setan ezukọta—Moses wee hụ ọtụtụ ụwa nile ndị mmadụ bi na ha—Ụwa nile na-enweghị ọnụ ogụgụ ka Ọkpara ahụ kere—Ọrụ na otuto Chineke bụ iweta na mmezu anwụgh-anwụ na ndụ ebighi-ebi nke mmadụ.
Chineke wee kee elu-igwe nile na ụwa—Ụdị nile nke ndụ ka e kere—Chineke emee mmadụ ma nye ya ọchịchị n’elu ihe nile ọzọ.
Chineke kere ihe nile na mụọ tutu ha adịrị n’ụdị okike n’elu ụwa—O kere mmadụ, anụ arụ nke mbụ, n’elu ụwa—Nwanyị bụ onye inye-aka kwesịrị nwoke ahụ.
Otu Setan si bịa bụrụ ekwensu—Ọ nwaa Iv ọnwụnwa—Adam na Iv adaa, ma ọnwụ abata n’ụwa.
Adam na Iv amụta ụmụ—Adam achụọ aja nye ma fee Chineke ofufe—A mụọ Ken na Ebel—Ken enupu isi, hụ Setan n’anya karịa Chineke, ma ghọọ nwa nwoke nke ila n’iyi—Igbu mmadụ na ime ihe ọjọọ a gbaa mbara—Ozi-ọma ahụ ka e zisara site na mmalite.
Mkpụrụ nke Adam e dobe akwụkwọ nke ncheta—Ụmụ-ụmụ ya ndị ezi omume ekwusaa nchegharị—Chineke ekpughee onwe ya nye Inọk—Inọk ekwusaa ozi-ọma ahụ—Atụmatụ nke nzọpụta ka e kpughere nye Adam—O wee nata baptism na ọkwa nchụ-aja.
Inọk kuziri, duzie ndị mmadụ ahụ, mee kwa ka ugwu ukwu nile megharịa arụ—E hiwere nnukwu obodo nke Zaịọn—Inọk buru-ụzọ hụ ọbịbịa Ọkpara nke Mmadụ, aja mgbaghara mmehie ọ chụrụ, na mbilite n’ọnwụ nke Ndị-nsọ—O wee buru-ụzọ hụ Mweghachi ahụ, Mkpokọta ahụ, Ọbịbịa nke Ugboro Abụọ ahụ, na nlọta nke Zaịọn.
Metusela na-ebu amụma—Noa-na ụmụ ya ndịkom e kwusaa ozi-ọma—Oke ajọọ omume a karịa—Ndị mmadụ anabataghị oku a kpọrọ maka nchegharị—Chineke enye iwụ-ọkụ nke mbibi nke anụ arụ dum site n’ide mmiri ahụ.
Abraham wee chọọ ngọzi nile nke usoro nke onye-isi ezi na ụlọ—Ndị nchụ-aja ụgha kpagburu ya na Kaldea—Jehova wee zọpụta ya—Isi mmalite nile na ọchịchị nile nke Ijipt ka a kọwasịrị na nke-nke.
Abraham wee hapụ Ua ịga Kenean—Jehova apụtakwute ya na Heran—Ngọzi nile nke ozi-ọma ka ekwere mkpụrụ ya nkwa na site na mkpụrụ ya nye mmadụ nile— O wee garuo Kenean na gawazie ruo Ijipt.
Abraham a mụta banyere anyanwụ, ọnwa, na kpakpando nile site na Urim na Tumim—Onye-nwe ekpugheere ya ụdị ebighi-ebi nke mụọ nile—Ọ mụtara maka ndụ tutu a bịa n’ụwa, ebu-ụzọ chie echichi, Okike, nhọrọ nke Onye-mgbapụta, na ọnọdụ ndụ nke ugboro abụọ nke mmadụ.
Chi nile ahụ a tụọ atụmatụ okike nke ụwa na ndụ nile dị n’elu ya—Atụmatụ ha nile maka ụbọchị isii nke okike ka e zipụtara.
Chi nile ahụ emesịa atụmatụ ha nke okike nke ihe nile—Ha eweta na mmezu okike ahụ dịka atụmatụ ha siri dị—Adam nyere ihe nile dị ndụ e kere eke aha.
Ihe esere ese na-ụdị ha dịbu nke 1
Ihe esere ese na-ụdị ha dịbu nke 2
Ihe esere ese na-ụdị ha dịbu nke 3
Jisus eburu-ụzọ kwupụta mbibi nke Jerusalem nke gaje ịdị n’oge dị nso—O wee na-ekwukwa maka ọbịbịa nke ugboro abụọ nke Ọkpara nke Mmadụ, na mbibi nke ndị ajọọ mmadụ.
Joseph Smith na-akọ maka agbụrụ ya, ndị ezi na ụlọ ya nile, na ebe obibi ha gboo—Otu mkpalite uche banyere okpukpe-chi nke na-abawanye na mpaghara ọdịda anyanwụ New York—O nwere mkpebi ịchọ amamihe dịka Jemes nyere ntụzi-aka—Nna na Ọkpara ahụ apụta ìhè, e wee kpọọ Joseph nye ije-ozị nke ibu-amụma ya (ama-okwu 1–20).
Anyị kwere na Chineke, Nna mgbe Ebighi-ebi, na n’Ọkpara Ya, Jisus Kraịst, na Mụọ Nsọ.